Hamro Yatra | » अमेरिकामा नेपालीको अवस्था कस्तो छ ? अमेरिकामा नेपालीको अवस्था कस्तो छ ? – Hamro Yatra
> अमेरिकामा नेपालीको अवस्था कस्तो छ ?
अमेरिकामा नेपालीको अवस्था कस्तो छ ?
२८ चैत, वाशिङ्टन डिसी । विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुप लिइरहेको ‘कोभिड–१९’ कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकाको न्युयोर्क शहर सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनेको छ ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म विश्वमा कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको सङ्ख्या १६ लाख नाघेको छ भने अमेरिकामा मात्र ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी छन् । यो सङ्क्रमणले १६ हजार अमेरिकीको ज्यान लिइसकेको छ । लगभग विश्वका नागरिककै बसोवास रहेको यस संयुक्त राज्यमा द्रुत गतिमा फैलिएको यो भाइरसको सङ्क्रमणले लगभग संसारका नागरिकमा नै चिन्ता छाएको छ ।
यो महामारीबाट अमेरिकामा बसोवास गर्ने नेपाली पनि नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । यसबाट यहाँका नेपाली तथा नेपालमा रहेका उनीहरुका आफन्त पनि चिन्तित छन् । अहिलेसम्म अमेरिकामा रहेका करिब ५०० नेपालीभाषी वा नेपाली मूलका नागरिक सङ्क्रमित भएको अनुमान गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा स्थायी तथा अस्थायी बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरुको दैनिकी गएका केही हप्तादेखि पूर्णरुपमा फेरिएको छ । अर्कातर्फ हरेक बिहान सुर्योदयसँगै नेपालमा रहेका आफन्तहरु कुनै अप्रत्यासित एवं दुःखद खबर सुन्नुपर्ने हो कि भनेर चिन्तित रहेको पनि बताउने गरेका छन् ।
अमेरिकी शहर न्युयोर्कको रिजउडमा विगत दुई दशकदेखि बस्दै र व्यवसायमा सञ्चालन गर्दै आएका वेद खरेल आफ्नो अमेरिका बसाइँको अवधिमा यस्तो होला भनेर कल्पनासमेत नगरेको बताउछन् । खरेलले भने, “बिहान सबेरै उठेर आफ्नो व्यवसायको अनुगमन तथा सहयोगका लागि हिँड्नुपर्ने मेरो दैनिकी अहिले घरभित्रै बस्ने, साथीभाइसँग कुराकानी गरी नेपाली समुदाय तथा अमेरिकाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्ने र परिवारसँग समय बिताउने भएको छ । खरेलले अन्य न्युयोर्कवासी जस्तै विगत १४ दिनदेखि व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द गरेर घरभित्रै बसेका छन् ।
खरेलले भने, “न्युयोर्कमा नेपालीहरुको बसोवासको जनघनत्व बढी भएको ज्याक्सन हाइट, उडसाइड, सन्नि साइड क्षेत्रमा सङ्क्रमित नेपालीहरु हुनुहुन्छ तर उहाँहरु कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने तथ्याङ्क हामीसँग छैन । यस विषयमा उही साथीभाइ र आफन्तबाट जानकारी लिने मात्र काम भएको छ ।”
न्युयोर्कको क्विन्समा बस्दै आएका रुद्र मगर अमेरिका बस्न थालेको १३ वर्ष भयो । उनको हरेक हप्ताको व्यस्त दैनिकी र त्यो व्यस्तताले दिएको आर्थिक समृद्धि अहिले बन्दकोठामा सीमित छ । उनलाई अमेरिकामा १३ वर्ष बितेको थाहा भएन तर अहिले भन्छन्, “मलाई त अमेरिका आएको अस्ति जस्तो लागेको थियो तर समय निकै द्रुत गतिमा अगाडि बढेको रहेछ, अहिलेको अवस्थामा काम बन्द गरेर घरभित्रै बिताएको दुई हप्ताले धेरै पछि फर्किएर सोच्न बाध्य बनाएको छ, यो दुई हप्ता मलाई दुई वर्ष जस्तो लागिसकेको छ ।” आफ्नो अमेरिका बसाइँमा यस्तो अत्यासलाग्दो अवस्था कहिल्यै महसुस नगरेको उनी बताउछन् ।
लामो समयदेखि न्युयोर्क बस्दै आएका सामाजिक अभियन्ता सूर्य लम्साल कोरोना भाइरसका कारणले सङ्क्रमित भएका नेपाली अत्यधिक भएको र उनीहरु आफ्नो साथीभाइलाई समेत भन्न नरुचाउने कारणले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न कठिनाइ भएको बताउछन् । यसले गर्दा आवश्यक मानिसलाई सहयोग गर्नसमेत नसकेको उनको भनाइ छ ।
न्युयोर्कमा बस्ने हरेक नेपालीले कुनै न कुनै रुपमा यो महामारी आफ्नो मानसपटलमा कैद गरेका छन् । कहिल्यै नसुत्ने शहरका रुपमा विश्वभर चर्चित न्युयोर्क शहरमा देखापरेको सन्नाटाबीचको त्रास व्यवस्थापन गर्न नेपाली समुदायलाई पनि उत्तिकै चुनौती रहेको छ । अहिले न्युयोर्क राज्यमा मात्र नभई अमेरिकाभर बसोवास गर्ने नेपालीको मनोवैज्ञानिक त्रास अत्यधिक रहेको छ । तसर्थ कतिपय मनोचिकित्सकले समेत उनीहरुलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
न्युयोर्कमा करिब ४० हजार नेपाली बसोवास गर्दै आएको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ । न्युयोर्कवासी नेपालीहरु त्रास, सन्त्रास र छिटो यो महामारीको अन्त्य हुने विश्वासका साथ व्यग्रतापूर्वक दिनहरु व्यतित गरिरहेका छन् ।
न्युयोर्कमा बस्दै आएका एनआरएन न्युयोर्क च्याप्टरका सभापति रामहरि अधिकारीको दैनिकी पनि अहिले पूरै फेरिएको छ । अधिकारीसहितको २६ जनाको टोलीले अहिले बिरामी भएर अत्यावश्यक सामानसमेत खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्दै आएको छ । “अहिलेसम्म हामीहरुले करिब १५० जनालाई अत्यावश्यक वस्तुहरु उपलब्ध गराएका छौँ, अरु संस्थाका साथीहरुले पनि यसैगरी सहयोग गर्नुभएको छ”, अधिकारीले भने ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म कोरोनाकै कारण नेपालीहरु अनिल लिम्बू, सोनाम लामा, थोक्मे विष्ट, अजयमान छोचुङ र निमा तेम्बा शेर्पाको निधन भइसकेको छ । यी दुःखद खबरहरुका बीच पनि कतिपय नेपाली कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भए पनि उपचारपछि नेगेटिभ रिपोर्टका साथ अहिले आराम गरी बसिरहेका छन् । सङ्क्रमितमध्ये धेरै अहिले क्वारेन्टाइनको चौध दिनको बसाइँ पूरा गरी विस्तारै आफूलाई सङ्क्रमणबाट सुरक्षित बनाएका छन् ।
तर अझै पनि आगामी १० देखि १४ दिनसम्म घरभित्रै वस्न स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुले अनुरोध गरिरहेका छन् ।